साहित्य/सिर्जना 23 पटक पढिएको २०७४ बैशाख २६ मंगलवार
डाँफे, कोकिल, स्याल र हुच्चिलको ,भाकाको तालमा, उकाली–ओरालि र मेलापातमा भ्याइनभ्याई पसिना चुहाउन बिबश गाँउलेहरुलाई, यसपालि चुनावको माहोलले गर्दा,बाटोघाटो, चौतारा र कान्छिको चिया पसलमा निकै फुर्सदिलो र प्रसन्नताका साथ, झुन्ड–झुन्ड बसेर, ठूल्ठूला राजनीति गफ हाँकेको देख्दा, नेताहरुले “हाम्रो उद्देश्य नै तपाईंहरुको मुहारमा खुशी झल्काउनु हो भन्थे” सायद ‘खुशी’ भनेको यहि होला, मेरो सुस्त मनस्थितिले बुझ्थ्यो।
म दुई महिनाको छोरोलाई घाममा सुताउँदै थिएँ। त्यतिखेर साईरन बजाउदै हुँइकिएको गाडिको आवाजले ,छोराको निन्द्रा बिथोलिएर रुन थाल्छ।
भित्रबाट आमा रिसाउँदै भन्नुहुन्छ-“यिनिहरुलाई चुनाब हारिएला पीर छ। आफुलाइ नाति दुब्लाउला भन्ने पीर छ।” सुत्नै दिएनन्, बज्याहरुले । नानी , बाबूलाई भित्र लगेर सुता।पल्लो गाउँको निधिरामको छोरा “रिवाज” त्यो चुनावमा उठेको छ । आज स्कुल नजिकैको चौतारीमा भाषण छ।´´
“आमा-त्यो रिवाज दाइको दुई वटा श्रीमती हैन?´´-मैले सोधे
``हो नि! मोराले जेठी हुँदा- हुँदै कान्छीलाई पनि,` म कुमार केटा हो ´भनेर भगाएर लेराएछ। पढेको, हुने खाने श्रीमान् भएर पनि निरह, एक्लो गाउँले जीवन बिताउन बाध्य छ जेठी। उता कान्छिलाई भने शहरमा महल बनाएर, “रानी” जस्तो गरि पालेको छ।
नानी, आ–आफ्नो कर्मको खेल…हिँड जाउँ, रिवाजको भाषण सुन्न।´´ -आमा भन्नुहुन्छ।
बाटोभरी आमाले भन्नुभएको, “कर्मको खेल” शब्दले पोल्छ मलाई। हराउँछु, आफै भित्र, के विवाहित पुरुष, सुरा–सुन्दरीको ईशारामा निरह भएर स्त्रीगमनमा रमाउँछ भने एउटा विवाहित नारीको कर्मको दोष हुन्छ? पुरुषको हरेक गल्ती र कमजोरिलाई नारीको भाग्यसँग तुलना गर्न मिल्छ? उत्तर पूरा नहुँदै निरन्तर प्रतिउत्तरले फेरि प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गराईरहँदा, नेता, “रिवाजको” भाषणले झर्सङ्ग हुन पुग्छु।´´
त्यतिखेर `नेता´,भन्दै हुनुहुन्थ्यो-गाउँघरको विकास, बाटोघाटो, बेरोजगार युवाहरू, पिछडिएका जनजाती, वृद्ध भत्ता, पुरुष पीडित नारीको हकहित, वहुविवाह, बालविवाह र छोरी भ्रुण हत्याको वहसमा बलियो आवाज उठाउनलाई नै मैले चुनावमा उम्मेद्वारी दिएको हो। यदि चुनावमा जितेँ भने ,वीरहरुको रगतको र देशको माटोको कसम खाँदै भन्दैछु । यी सबै कुराको विकास र उद्धार गरेरै छाड्नेछु।
तर हुलको बिचबाट कसै कसैले भनेको सुन्छु ।
नेता ज्यू! तपाईंबाट पीडित जेठी श्रीमतीको पहिला उद्धार गर्नुहोस् । त्यसपछि हामी गाउँलेको र देशको बारेमा सोच्नुहोस्।